ကလေးတွေဆော့တာ မပြီးကြသေးပါလား။ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » ကလေးတွေဆော့တာ မပြီးကြသေးပါလား။	19
Posted by ခင် ခ on Aug 3, 2012 in My Dear Diary | 19 comments
မနေ့က ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ရုံးပိတ်တာနဲ့ ညနေခင်းအိမ်ရှေ့မှာထိုင်ရင်း ၀ယ်လာတဲ့ဂျာနယ်ဖတ်နေတုံး အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်မှာ ကလေးအုပ်စုတွေစော့ကစားနေကြတာကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ကစားတဲ့ကလေးအုပ်စုကနှစ်စုလောက်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကစားနေကြပုံမှာ -
အဖွဲ့လိုက် – အရူးမကြီး မစာဥ ဘယ်သွားမလို့လဲ၊
တစ်ယောက်သမား – တိရိစ္ဆာန်ရုံသွားမလို့၊
အဖွဲ့ – ငါတို့လည်းလိုက်မယ်၊
တစ်ယောက် – မလိုက်နဲ့၊ ဟိုရောက်ရင် ကျားတွေ ဆင်တွေ ကိုက်လိမ့်မယ်၊
အဖွဲ့ – ကိုက် ကိုက် သေ သေ
တစ်ယောက် – ဒါဆိုငါ့ကို အရူးမကြီး မစာဥ လို့ မခေါ်နဲ့၊
အဖွဲ့ – ခေါ်မယ် ၊ အရူးမကြီး မစာဥ အရူးမကြီး မစာဥ
( အော်ဆိုသူကဆို လိုက်သူကလိုက် ပတ်ပြေးသူကပြေး နဲ့ ကစားလေရဲ့ )
နောက် အုပ်စုတစ်စုက -
အဖွဲ့လိုက် – ညောင်ပင်တစ္ဆေ ဝေလေလေ နင်ဘယ်ကိုင်းမှာနေ၊
တစ်ယောက်ထဲ – ညောင်ကိုင်းမှာနေ၊
အဖွဲ့ – နင်ဘာသီးစား၊
တစ်ယောက် – ညောင်သီးစား၊
အဖွဲ့ – နင်ဘာရေသောက်၊
တစ်ယောက် – ညောင်ရေသောက်၊
အဖွဲ့ – နင်သေရင်ဘယ်သူ့ကိုခြောက်၊
တစ်ယောက် – နင်တို့အားလုံးခြောက်၊
ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ဂျာနယ်မှာ The Voice နှင့် Envoy ဂျာနယ်တို့အား ထုတ်ဝေခွင့် ယာယီရပ်ဆိုင်း ဆိုပြီးသတင်းဆောင်းပါးလေးပါလို့ဖတ်ရပြီး၊ ဟိုတစ်နေ့က the best ရဲ့ The Voice နှင့် Envoy ဂျာနယ်နှစ်စောင် အပိတ်ခံရ ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ခဲ့ရတော့ ကလေးတွေကစားတာနေတဲ့ ကစားပုံလေးနဲ့ ဒီလိုတော့ တွေးမိလိုက်တယ်၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ် အခုမပေးဘူး နောက်တစ်ခါကြပေးပြန်တယ် သိပ်မကြာဘူး မပေးပြန်ဘူး၊ အင်း – ကလေးတွေ အရူးလုပ်တမ်းစော့သလိုမျိုးများ အပျင်းပြေစော့တာလား၊ ညောင်ပင်တစ္ဆော့ လိုခြောက်လှန့် တမ်းစော့နေတာလား တောင်ထင်မိပါရဲ့။ အဲဒီလိုအတွေးနယ်ချဲ့မလို့ဘဲ ရှိသေးတယ် အိမ်ရှေ့ကစော့နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ အသံက စိတ်ဝင်တစား နဲ့ အားပိုပါလားလို့လားတော့ မသိဘူး အသံတွေတောင်ပိုကျယ်လာသလိုဘဲ ကြားလိုက်ရတာက-
အင်း—– ကလေးတွေ ကလေးတွေ ဆော့တာ မပြီးကြသေးပါလားနော်။
About ခင် ခ
ခင် ခ has written 198 post in this blog.
View all posts by ခင် ခ →	Blog
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: တင်စားသွားတာ ကောင်းတယ်ဗျို့ ..
ကလေးတွေ ဆော့နေကြတာ မပြီးသေးဘူးလား … တဲ့ …. :D
ကျနော်ကတော့ဖြင့် ညောင်ပင်တစ္ဆေကို ဖတ်မိပြီး
ကစားခဲ့ဖူးတာကိုပဲ အမှတ်ရမိသွားပါကြောင်း ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 753
P chogyi says: ဒါက လူကြီးတွေဆော့တာဆိုတော့
Ma Ei says: ဒီကလေးတွေကတော့
ဆော့ ကစား လို့ကို ပြီးမထင်ပေါင်
etone says: ကိုခင်ခရေ …. ကလေးတွေဆော့နေတာဆိုလျှင်ပြီးချင်ပြီးမယ် … သူငယ်ပြန်နေတဲ့ လူတွေဆော့နေတာမို့ မပြီးသေးတာပါ … ဟိဟိ …. ။ :D
ဝေးလွင့်တိမ် says: ဆော့ရတာပျော်စရာကြီးပဲကို … ပြီးနိုင်ပါဘူး … ။ ခ်ခ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2345
ko khin kha says: အဆော့ရပ်တဲ့အခါမှ မီဒီယာဈေးခင်းကြမှာမို့ပါ။ သူတို့ဆော့နေတုံးသွားခင်းလို့ ဈေးဘမ်းမှောက်မှဖြင့်ကွယ်။
အတိသဌ္ဇနာဂရ says: ပြီးရင်သူတို့ က ဘွာတေးခတ်လို့ ရသေးသပ။
မွန်မွန် says: တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ကစားတာ ရပ်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ကိုခင်ခရေ….
မောင်ပေ says: လုပ်ကွက်တစ်ခုကို မှားပိတ်မိတယ်ဆိုပြီး
နောက်ထပ် လုပ်ကွက်တစ်ခုနဲ့ ချွေးသိမ့်တတ်တာကလား
ကြောင်ဝတုတ် says: ကလေးတွေဆော့တာက သိပ်မခံစားနိုင်တော့ရင် အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီး
လူကြီးတွေကစားကတာ ငြိမ်ငြိမ်လေးတောင်းပန်တာတောင်… ထောင်ထဲထည့်ပစ်ချင်သေးတာ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုခရေ ကော်ပီအင်ပေ့စ်ဖြစ်နေတယ် ပြင်လိုက်အုံးနော်
ထူး ဆန်း says: ဆော့တာလည်း ဆော့ကြပါဗျ။
ko khin kha says: ဖတ်ရှု့အားပေးသူတွေရော၊ ကွန်မန့်ပေးကြသူအပေါင်းရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပါးစပ်နှင့်လက်တန်းအုပ်ချုပ်မှု့မှသည် စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်မှု့သို့ မျှော်လင့်နေကြပါသည် မြန်မာပြည်။
mamanoyar says: ငယ်ငယ်တုန်းကညောင်ပင်တစ္ဆေ ဆော့ခဲ့တာ ပြန်အမှတ်ရသွားတယ်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကလေးဘဝကို ပြန်လွမ်းသတိရမိပါတယ်
ကြောင်ကြီး says: ဟုတ်ဖူး..အချစ်စမ်းနေတာ။
manawphyulay says: ဒါကြောင့်ပြောတယ်။ ဥပဒေနှစ်ခုပဲ ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတာ မသိကြလေရော့သလားကွယ်။
တော်ကြာတစ်မျိုး ဆိုတဲ့ နည်းကိုပဲ ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ရမယ်။
ငယ်တုန်းကတော့ ကလေးစိတ်နဲ့ အကုန်ဆော့တာပဲ။ တစ်နေကုန်ဆော့နေရလည်း မမောဘူး။ အိမ်က ထမင်းစားဖို့ လှမ်းခေါ်လည်း ဆော့ကောင်းတုန်းပဲ။ ခုလည်း ဆော့ရမယ်ဆို ဆော့ချင်သေးတယ်။ :P
snow white says: ကလေးတွေဆော့တာလည်း ပျော်စရာကြီးနေမယ်နော် ။။
နေ၀န်းနီ says: ငေါက်မရတဲ့ ကလေးတွေ မင်းမနိုင်ရပ်ကွက် ကျနေတာပဲ ညဆယ့်နှစ်နာရီကျော်တာတောင် ဆော့လို့ မပြိးကြသေးဘူး…။ ဂွနဲ့ ထွက်ပစ်လိုက်ရ မကောင်းရှိရော့မယ်…။
အိမ်နားမှာလာဆော့နေတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ရောပြီး ………………..
marblecommet says: ခိုင်မာတဲ့ မူမရှိဘူး
စစ်မှန်တဲ့ စေတနာပါတဲ့ အပြောင်းအလဲကို မလိုချင်ဘူး
လူပြောများလို့ ဖိအားများလာလို့ မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲပေးရဖို့
လိုအပ်လာလာလို့သာ ဖြည်းဖြည်း ဖြေလျော့ပေးတာ
ပြောဖို့ ငတ်နေသူတွေ ပြဖို့ ငတ်နေသူတွေ က
မိမိရရ ထောက်ပြတာ ဖော်ပြတာ ဖွင့်ပြတာမျိုး
ဖြစ်လာပြီဆို တီကို ဆားထိသလို တွန့်ခနဲ တွန့်ကနဲ့ပြန်ဖြစ်….
အာဏာဆိုတဲ့ အတ္တစက်လေး ပါသွားတော့မှာပါလား ဆိုတဲ့
ဒီတော့ ကလေးကစားသလို ဘွာတေးပြန်လုပ်…..
ဒီလိုနဲ့ ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်နေတာပဲဗျ….